Italiana dia mandoa an'i Apple amin'ny fiantohana tsy fantatra momba ny Apple Care | Vaovao IPhone
Cristina Torres sary placeholder | | Apple products
Azo antoka fa tadidinao io olana io izay tsy netezan'ny Apple tsara loatra noho ny fisavoritahana izay Vokatra Apple Care toy ny hoe fiantohana fanampiny mandritra ny roa taona. Raha ny marina, ny Vondrona eropeana dia manana politika iraisana amin'io lafiny io izay manery ny mpanamboatra hanome antoka roa taona amin'ny vokatra amidiny. Nihevitra i Italia tamin'ny 2011 fa mety handika lalàna ny paoma amin'ny tsy fanazavany mazava amin'ireo mpampiasa fa tsy tokony handoa zavatra fanampiny izy ireo amin'ny fananana izay nomen'ny norma azy ireo.
Amin'ity tranga ity, ny Ny orinasa izay lasa komisionan'ny tsena any Espana dia nihevitra fa meloka i Apple, ary nanameloka azy handoa onitra zerô vitsivitsy. Ny totalin'ny vola tsy maintsy naloan'ny paoma noho ny fikorontanana nateraky ny Apple Care dia 900.000 euro. Anisan'ireo fiampangana anao ny fampidirana fikorontanana sy ny mety hampiakarana ny tombom-barotra azo avy amin'ny fampisehoana ny fampahalalana ho an'ny mpanjifa izay tsy marina tanteraka.
La ny fanamelohana dia tsy mamarana ny adihevitra momba ny Apple Care. Raha ny marina, manamarika ny fitohizan'ny raharaha any Italia io. Ny lamandy dia iray amin'ireo ampahany notakiana tamin'ny Apple. Ny ambiny dia misy ifandraisany amin'ny fanarahana tanteraka ny lalàna sy ny fampisehoana amin'ny mpanjifa ny fampahalalana marina momba ny antoka omen'ny lalàna sy ny fiantohana izay mety ho fanampiny toy ny vokatra amidin'i Apple.
Aza adino fa amin'ny tranga Espaniôla dia mividy ny vokatra novidianao tamin'i Apple ianao dia voatery manarona ireo lesoka na olana amin'ny orinasa sy ny asa raha tsy mbola nisy ny tranga. mandritra ny 2 taona nefa tsy mila mandoa na inona na inona amin'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Italiana dia mandoa an'i Apple noho ny antoka tsy dia mazava momba ny Apple Care
Apple dia hanala ny jack headphone amin'ny iPhone 7